Home Wararka Gudoomiye Maxamed Mursal oo ka guuray Villa Soomaaliya
Gudoomiye Maxamed Mursal oo ka guuray Villa Soomaaliya
Gudoomiyaha Baaralamaanka ayaa maanta ka guuray hoygii uu ka daganaa xarunta Villa Soomaaliya isaga oo u guuray Hotel Shabeelle oo ku yaalo xaruntii hore ee hay’adda UNPD ka deganaan jirtay magaalada Muqadishu. Guuritaanka gudoomiyaha ayaa waxaa maanta galbiyay ciidan ku hubaysan in ka badan 20 gawaari kuwaas oo doonayay in ay xaqiijiyaan amaankiisa.
Xildhibanadda Baarlamaanka ayaa loo diiday in ay si xur ah ula kulmaan Gudoomiye Mursal. Hoyga cusub oo uu gudoomiyaha dagay ayaa u suuragalinaysa xildhibaanada in ay kulamo joogta ah ay la yeeshaan Gudoomiye Mursal.
Previous articleGolaha Aqalka sare oo meel-mariyay sharciyo muhiim ah
Next articleBaydhabo oo lagu qabtay gaari ay saaran yihiin walxaha qarxa
Sawir Qaade Saciid Fadhaye oo weli u xiran Dilkii Elmaas Elman...
(Akhriso) Madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud oo ka digay in Dalka...